Esther Massundah Archives - Zimbabwe Voice
OBITUARY: Esther Massundah, a workaholic gone too soon
By Michael Gwarisa ESTHER Massundah or the Queen as she was affectionately known within the National Blood Service Zimbabwe (NBSZ) was a perfectionist and workaholic. She paid attention to detail. A simple tiny typo on her surname which I used to write as Masunda before being corrected countless times over the phone earned me numerous mini lectures on how to…
NBSZ says its deceased manager tested negative for COVID-19
THE National Blood Services of Zimbabwe (NBSZ) has dismissed reports which suggest that its spokesperson, Esther Massundah succumbed to COVID-19, saying she actually tested negative. The National Blood Service Zimbabwe issued a statement after reports which said Esther Massundah had died of COVID-19 related complications. Below is NBSZ’s statement: Death Notice of Esther MassundahNBSZ dismisses claims by some sections of the media, that COVID-19…
National Blood Services senior manager dies of COVID-19
THE National Blood Services of Zimbabwe (NBSZ) public affairs manager and spokesperson Esther Massundah has died from COVID-19 related complications. In a statement announcing Massundah’s death, the Zimbabwe Institute of Public Relations said she died on Tuesday morning and funeral arrangements will be announced in due course. “It is with a heavy heart that the Zimbabwe Institute of Public Relations…